Funda umthandazo onamandla wokukhuselwa emsebenzini.
Funda umthandazo onamandla wokhuselo emsebenzini. Umsebenzi yenye yezinto esizixabisa kakhulu namhlanje. Umphakathi ongxowankulu esihlala kuwo namhlanje ufuna ukuba sibe nomsebenzi wokuzixhasa, wokuxhasa iintsapho zethu, kwaye sonwabe. Ukungabikho kwayo kubangela ukulwa, iziqhulo nezinye iingxaki. Funda njengomthandazo wokuzikhusela emsebenzini kwaye uzole.
Sijikelezwe abantu abanomona ababa amandla ethu, ulonwabo kunye nempumelelo emsebenzini. Oku kuhlaselwa kwamandla amabi kusitsalela kuthi kwaye kunokubeka ubomi bethu kwisigaba esibi. Ukuthintela le, kuthekani ngokuthandazela ukukhuselwa emsebenzini? Nantsi enye Umthandazo wokugcina umsebenzi wakho.
1 Funda umthandazo onamandla wokhuselo emsebenzini
1.1 Kuthekani ngomthandazo okhuselayo kwindawo yethu yokusebenza?
«Ozukileyo oNgcwele uJoseph, umzekelo wabo bonke abo basebenza nzima,
Fumana ubabalo lusebenze kumoya wokuzohlwaya ngenxa yezono zam ezininzi;
Sebenza ngenkuthalo, ukubeka inkonzo yeyona nto ibalulekileyo ngaphezulu kweendlela zam;
Sebenza ngenkumbulo kunye novuyo, ujonge njengembeko yokuqasha kunye nokuphuhlisa ngomsebenzi izipho ezifunyenwe nguThixo;
Sebenza ngolungelelwano, uxolo, ukumodareyitha kunye nomonde, ungaze urhoxe ekudinweni nakubunzima;
Ukusebenza, ngakumbi ngokucoceka kweenjongo kunye nokuzibandakanya kum, ndihlala ndiphambi kwamehlo am ukufa kwaye ingxelo ekufuneka ndiyinike ixesha lokuchitha, iitalente ezingasetyenziswanga, ukulunga okushiyiweyo, kunye nokuzonwabisa okulilize kwimpumelelo, kuyintlekele emsebenzini kaThixo!
Zonke izinto zikaYesu, zonke ezikaMariya, zonke izinto onokuzixelisa, Patriarch Saint Joseph!
Eya kuba yintsingiselo yam ebomini nasekufeni.
Ngegama likaYesu Krestu.
Kuthekani ngomthandazo okhuselayo kwindawo yethu yokusebenza?
Umthandazo wokusikelela indawo yokusebenza
"Thixo uYise wokulunga, mdali wezinto zonke kwaye ungcwalise zonke izidalwa: siyabongoza kuwe ndikusikelele kule ndawo yomsebenzi.
Ngamana ubabalo loMoya oyiNgcwele wakho ungahlala ngaphakathi kwezi ndonga, ukuze kungabikho kungqubana okanye ukungavani. Suka kule ndawo wonke umona!
Ngamana iingelosi zakho zenkampu ezikhanyayo ezijikeleze eli ziko kunye kuphela uxolo kunye nokuchuma abahlali kule ndawo.
Nika abo basebenza apha intliziyo elungileyo nenesidima ukuze isipho sokwabelana singenzeka kwaye iintsikelelo zabo zisanda.
Nika impilo abo bagcina le nkxaso kwiintsapho zabo, ukuze bahlale becula iingoma zokudumisa.
Ngoku ukuba ufunde umthandazo onamandla wokhuselo emsebenzini, thatha umzuzwana ufunde ngakumbi:
Qonda izibonelelo zonyango lombala.
(embhile) https://www.youtube.com/watch?v=IMky711u04g (/ embed)